36 လူမှုမီဒီယာ၏စည်းကမ်းများ | Martech Zone
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 16, 2012 သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 16, 2012 Douglas Karr
သင်ဤ blog ကိုအချိန်အတန်ကြာဖတ်ပြီးပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်စည်းမျဉ်းများကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသည်ကိုသင်သိသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အလွန်ငယ်ရွယ်သေးသည်၊ ထို့ကြောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်အချိန်မတန်သေးဟုထင်ရသည်။ FastCompany မှရှေးရှေးများသည်အကြံဥာဏ်များအတိအကျစုဆောင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုခေါ်ခြင်းများပြုလုပ်သည် လူမှုမီဒီယာ၏စည်းမျဉ်းများ.
ဤအချက်အလက်သည်မဂ္ဂဇင်းစက်တင်ဘာထုတ်ဝေသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။ ဒီစည်းမျဉ်းတွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖောက်ဖျက်မိပြီးရလဒ်တွေလည်းရနေတုန်းပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့လူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။
FastCompany သည်သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုစုဆောင်းနေသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် သူတို့ကိုအွန်လိုင်းပို့ပါ.
Tags: မြန်မာသံရုံးလူမှုမီဒီယာ၏စည်းမျဉ်းများလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာ infographicဆိုရှယ်မီဒီယာစည်းမျဉ်းများဆိုရှယ်မီဒီယာအကြံပေးချက်များ
30:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 55
တစ်ခါတရံမှာ စည်းကမ်းတွေကို လျစ်လျူရှုမိပေမယ့် အဲဒီလို စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာတဲ့လူတွေကို လေးစားတဲ့နည်းနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့ စည်းကမ်းတွေကို သည်းခံပြီး စည်းကမ်းတွေကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာမှန်သမျှ လုပ်ပါတယ်။
မတ်လ 4, 2013 မှာ 11: 54 AM
ဒီအစုအဝေးကို ကျွန်တော်သဘောမတူသလို အချို့က ဆိုရှယ်မီဒီယာအကြောင်းတောင် မထင်ပါဘူး။
မတ်လ 5, 2013 မှာ 10: 45 AM
ဧပြီ 11, 2013 မှာ 5: 13 pm တွင်
“…ဆိုရှယ်မီဒီယာက အရမ်းငယ်သေးတဲ့အတွက် ဒီအချိန်မှာ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ အချိန်မတန်သေးလို့ထင်တယ်” ၎င်းတို့သည် အချိန်မတန်သေးဘဲ - ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး 'စည်းကမ်းများ' ၏ သဘောတရားသည် ရယ်စရာကောင်းသည်။ လူမှုရေး 'Best Practices' တွင် ဟန်ဆောင်ထားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ အားလုံးအတွက် Ditto ... ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးထွက်စာအုပ်ကို သင့်အား ရောင်းချရန် မကြိုးစားပါက၊ ထိုအခြေအနေတွင် ၎င်းတို့ကို ဆက်လက်စုစည်းပါ။
လေးလေးနက်နက် – Twitter မှာ ပို့စ်တင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေ့ ဒါမှမဟုတ် အချိန်မရှိဘူး… ဒါမှမဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်တွေအတွက် လူမှုအကျိုးပြုအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးတစ်ခုပါပဲ – လူမှုကွန်ရက်မှာ စျေးကွက်တင်ခြင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိပြီး အဲဒါတွေကိုပဲ တွေးနေရုံနဲ့ သင့်ခေါင်းကို လှည့်ပတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးသည် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသည်… ရှုပ်ထွေးသည်… စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလားအလာများနှင့်အတူ ရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်နေသည် – နှင့် ယင်း၏ဘဝဘဝကို ရိုးရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူတိုင်းအတွက် အလားအလာရှိသော အခက်အခဲများ။